आफ्नी ४ वर्षकी छोरी र २ वर्षका छोरालाई आमाले कुकुरको मासु खुवाइन् आखिर किन ? – News Nepali Dainik
आफ्नी ४ वर्षकी छोरी र २ वर्षका छोरालाई आमाले कुकुरको मासु खुवाइन् आखिर किन ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७ समय: १४:०२:११
** एउटी आमाले आफ्ना नाबालक सन्तानका लागि खुवाउने कुरा केही पनि पाइनन् । आफु भोकै ***रहेपनि सन्तानलाई भने आमाले भोको देख्न सक्दैनन् । खुवाउने कुरा केही नभएपछि आफ्नी ४ वर्षकी छोरी र २ वर्षका छोराला**ई उनले कुकुरको मासु खुवाइन् । उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो ।
युक्रेनकी यि महिला बस्ने घरको किस्ता र अन्य सुविधानको पैसा नतिरेका कारण उनके घरमा पानीको सप्लाई पनि बन्द भएको थियो । ५ सन्तानकी आमा उनले अन्य ३ सन्तानको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी पनि गुमाइसकेकी थिइन् । अस्वस्थ्यकर खाना खुवाएका कारण बालबालिकाहरु पनि अस्वस्थ्य भएका थिए । उनको छिमेकमा बस्ने एक महिलाले त्यस बारेमा **प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि बालबालिकालाई प्रहरीले उद्दार गरेको छ ।
बालबालिका सुरक्षित स्थानमा छन् भने आमालाई पक्राउ गरिएको छ । आमाले उनीहरुलाई कुकुरको मासु खुवाएको सूचना पाएपछि पुगेको पुलिसले उनीहरुको उद्धार गरेको हो ।
डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार युक्रेनकी ती महिलाले गल्लीमा घुम्ने भुस्याहा** कुकुर घरमा ल्याउँथिन र छोराछोरीलाइ त्यसैको मासु खुवाउने गरेकी थिइन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण उनको घरको हालत पनि निकै नराम्रो थियो । घर निकै फोहर थियो । घरमा भित्ताबाट साङलाहरु खस्थे । युक्रेनको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको खारकिव शहरमा आफ्ना २ छोराछोरी र आमासँग बस्ने लिलिया ग्रेनेन्कोलाई पक्राउ गरिएको हो ।
रिपोर्टका अनुसार यी महिलाले घरको वास्ता गर्थिनन् । घरमै वर्षौंदेखि फोहर थुपारीएको थियो**। जसका कारण यो घरमा साङला र मुसाको संख्या अत्याधिक भएको थियो । पानीको आपुर्ती बन्द भएका कारण शौचालय पनि हेर्न नसकिने थियो ।
लिलियाले छोराछोरीलाई बाहिर जान पनि दिँदैनथिन् । पुलिसले उद्धारपछि उनका छोराछोरीलाई अस्पताल पठाएको छ । अस्वस्थ्यकर खाना खाएका कारण उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक भएको थियो । **फोहर ठाउँमा बसेका कारण पनि उनीहरुलाई समस्या थियो । उनको घरमा पुग्दा त्यहाँ छरिएको फोहर देखेर पुलिस पनि चकित परेका थिए । लिलिया दोषी ठहरिए उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ ।
Last Updated on: February 1st, 2021 at 2:02 pm